Fivoriana manokana ho an'ny Antenimierandoholona | Primature
Lapan’i Mahazoarivo, ny 19 janoary 2021- Nanome voninahitra ny fivoriana voalohany notanterahin’ireo Loholon’i Madagasikara vaovao 18 mianadahy, ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay
Christian, sy ny mpiakambana sasany ao amin’ny governemanta, tetsy amin’ny Lapan’ny Antenimieran-doholona Anosikely, androany maraina.
Nananganana ny birao maharitra sy ireo vaomiera izany fivoriana izany, ary natomboka tamin’ny fifidianana ny Filohan’ny Antenimieran-doholona. Lany 100 % ho filohan’ny Antenimieran-doholona, tamin’ny alalan’ny latsa-bato miafina, ny kandidà tokana, Andriamatoa Razafimahefa Herimanana.
Toky no nomeny ho an’ny Praiministra sy ny governemanta fa hifanome tànana sy hanao izay azo atao amin’ny fiaraha-miasa ny Antenimieran-doholona hotantanany. Vonona ireto Loholona vaovao ireto
hijery miaraka ny vahaolana samihafa sy hampandany ireo lalàna mifanandrify amin’ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy.
Niarahaba azy 18 mianadahy loholon’i Madagasikara izay voafidy sy voatendry, ny Praiministra ary niarahaba manokana ny Filohan’ny Antenimieran-doholona. Miaina ao anatin’ny tany tan-dalàna isika,
hoy ny Lehiben’ny governemanta, ka ao anatin’izany ny fanajana ny fisian’ny fifandimbiasan-toerana eo amin’ny Andrim-panjakana rehetra toy ny eo anivon’ny Antenimieran-doholona. Inoana sy antenaina fa
raha ny tombontsoa ambonin’ny firenena no trandrahina sy jerena hatrany, dia hiroso tokoa amin’ny fitsinjovana ny vahoaka Malagasy isika, hoy ihany ny Praiminisitra.
Mahakasika ny raharaham-pirenena ankapobeny, dia nanterin’ny Praiministra, araka ny efa voalazan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika hatrany, fa “atokantsika manokana ho fanatanterahana ireo
vina maro samihafa, indrindra ireo “engagements” maro ity taona ity”. Nambarany fa “ny firosoantsika amin’izany dia antoka fa hitondra vahaolana isika amin’ireo olana samihafa atrehin’ny vahoaka
Malagasy amin’izao fotoana izao; anatin’izany ny tsy fananana asa, ny fidàngan’ny vidim-piainana, ny tsy maintsy hitsinjovana ireo tambanivohitra toy ny amin’ny tsy fahampian-drano sy ny maro hafa, ny
any Atsimo manokana ihany koa indrindra fa ny fandrindrantsika ny ezaka mahakasika ny ady ataontsika amin’ny valan’aretina corona virus.”
Momba ny valan’aretina corona virus, efa voalazanay ombieny ombieny, hoy ny Praiministra fa mbola tsy mifarana ny ady atao ary hofehezina araka izay azo atao ny valan’aretina. Nohamafisiny àry fa ny fanajàna ny fepetra efa napetraky ny fitondram-panjakana dia fomba andraisan’ny olom-pirenena rehetra anjara amin’izany ady izany. Ka tokony harahin’ny vahoaka Malagasy hatrany, ny toromarika omen’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 13 Janvier 2021
Conseil du gouvernement du Mercredi 20 Janvier 2021 →